China Metal Standing Seam Fold Machine ary mpanamboatra | YingYee
Material:Steel miloko, vy nandrisika, Steel Aluminium
Hafainganana mamorona:15-20m / min
Fitaovana milina mitsivalana miendrika vy miorina amin'ny fifehezana PLC, fahita matetika AC ary manamboatra ny haitao hafainganana, ary mahatsapa ny famokarana mandeha ho azy, noho izany, dia karazana famokarana angovo be mpamokatra angovo sy mahomby be ho an'ny firafitra vy izy io.
Decoiler - Torolàlana famahanana - Main Roll Forming Machine - PLC Contol System - fanapahana hidrolika - latabatra famoahana
Akora Coil efa vita hosodoko, coil Galvanized, coil Aluminium
Haavo matevina ara-materialy 0.2-1mm
Rollers 12-20 andalana
Savaivony sy ny fitaovana 70mm, 40 Cr ny fitaovana
Hafainganana mamorona 10-15m / min
Fitaovana fanapahana Cr12 bobongolo vy miaraka amin'ny famonoana 58-62 ℃
Herin'ny motera lehibe 4KW
Herin'ny motera hydraulic 3KW
Zintin'aratra 380V / 3Phase / 5Hz
Ny lanja tanteraka manodidina ny 3 taonina
Rafitra mifehy Omron PLC
YINGYEE no mpanamboatra manokana ny milina fananganana hatsiaka isan-karazany sy ny tsipika famokarana mandeha ho azy. Manana ekipa mahafinaritra izahay miaraka amin'ny haitao sy varotra tena tsara, izay manolotra vokatra matihanina sy serivisy mifandraika amin'izany. Izahay dia nandinika ny habetsahana ary taorian'ny serivisy, nahazo tamberina sy fanajana fatratra ny mpanjifa. Manana ekipa tsara izahay aorian'ny serivisy. Nandefa patch maromaro izahay taorian'ny ekipan'ny serivisy hanara-maso ny famitana ny vokatra sy ny fanitsiana. Ny vokatray dia amidy amina firenena 20 mahery sahady. Anisan'izany US sy Alemana. Vokatra lehibe:
Mitady mpanamboatra sy mpamatsy milina miorina tsara? Manana safidy malalaka amin'ny vidiny lafo izahay mba hanampiana anao hamorona. Ny milina metaly famolahana metaly rehetra dia azo antoka tsara. Izahay dia China Factory Factory an'ny vy milahatra. Raha manana fanontaniana ianao dia aza misalasala mifandray aminay.
Sokajy vokatra: milina mitsangana mitsangana miorina
Previous: Milina lamba avy eo an-tampon'ny lamba
Manaraka: Milina Steel Sodina Roll Pipe Roll Forming Machine
Masinina miorina amina horonantsary mijoro
Milina vita amin'ny tile vita amin'ny tile
Masinina manify miforona
Milina fanaovana tafo vita amin'ny taila vita amin'ny taila